Usizwe ukuyobhaca umculi kamaskandi | News24
Usizwe ukuyobhaca umculi kamaskandi
Johannesburg - Kuphoqe ukuba ayofihlwa kwenye indawo umculi kamasikandi ofike ngezinkani ngengoma ethi Siyobulala uVan Damme emcimbini wokulwa nokubulawa kwabantu abanebala elimhlophe nokwebiwa kwezimoto ziweliswe umngcele ziyiswe eMozambique obuseMkhanyakude enyakatho-mpumalanga yeKwaZulu-Natal ngempelasonto.
Lokhu kwenziwe ngoba abanye abaculi bebephazamiseka ngenxa yokujatshulelwa kwaleli ciko ebeseliqedile lona ukucula.
UMroza Fakude utheleke kwabancane indawo emcimbini kanti nemoto yakhe iphume sekunzima, beyivimbile abantu besho nokuthi bayaqala ukumbona ngamehlo lo mculi oshaye ingoma ethakaselwa ngalolu hlobo.
Lo mculi uthi ukuthokozelwa kwakhe kusho lukhulu emculweni wakhe nokuba yingxenye yokunqandwa kwalesi sihlava esikhula ngesikhulu isivinini eMkhanyakude.
"Ukubulawa kwabantu bakithi kufanele sikusukumele, silwe nakho ngoba yibona abathenga umculo wethu. Ngijabulile ukubona abantu bengithakasela. Asihambisani impela nje nokubulawa kwabantu, mayiyekwe le nto," kusho uMroza.
Bekuheleza umoya wokuzwana nokuhloniphana kubaculi nabalandeli kulo mcimbi obekuphume nesinedolo kuwona. Bekunandisa abaculi abaphuma ezindaweni ezahlukene ngaphansi kwesifunda uMkhanyakude, abebeyokhuza umhlola ngalezi zigameko.
Abaculi asebemkantshubomvu bavulelwe inkudla nguZero Khumalo ongumfowabo kaMfazomnyama ongasekho.
OLUNYE DABA: Ushaywe wumbani washona owesifazane obekhulelwe eMtuba
Iqembu laseMtubatuba - ngaphansi kwawo uMkhanyakude - Abahlaziyi, lifike lashaya ingoma labhodloza isiteji ngamabhuzu. Belishaya ingoma yalo enxusa izigilamkhuba ukuba zihlukane nokubulala amaphoyisa.
Inyanga yaKwaMhlabuyalingana ebambe elikhulu iqhaza empini yokulwa nababulala abantu abanebala elimhlophe - ngenkolelo yokuthi izicubu zabo kuthakwa ngazo amakhathakhatha enza umuntu acebe - ithwale kanzima ngesikhathi iya esiteji kunabesifazane abavele bayimemeza bethi bacela umendo.UMnu Mthembu unxuse umphakathi ukuba ubavikele abantu abanebala elimhlophe.
"Ngazibophezela ekuvikeleni abantu abanebala elimhlophe, kanjalo nezigebengu ezintshontsha izimoto zabantu nemfuyo kangizibheki. Sithi makuphele ukubulawa kwamaphoyisa uma elwa nesitha somphakathi okuwubugebengu," kusho uMnu Mthembu.
UMnu Mjaphani Mkhize ongusihlalo wekomidi elihlele lo mcimbi, utshele izethameli ukuthi usuzoba khona minyaka yonke.
Umcimbi uvalwe ngezingoma ezimbili ezikwi-albhamu ekhishwe ngabaculi abane abazibiza ngeziNsimbi Zangempela.
Le albhamu ikhuza lezi zigameko okukhalwa ngazo eMkhanyakude.
Laba baculi abane nguQalindaba Mkhize, uBreakdown Khumalo ohola iqembu laKwaNibela iBreakdown, uSbongiseni Mbatha ohola aMambeje Amahle noNkonzo Mkhize ohola aMagusheshe.
Phakathi kwabaculi abashiyelane inkundla, kubalwa Izintombi zikaMjaphani, uMroza, Abafana bakaSgubhu, uMgojeli nabanye abaningi.